ကြီးလာမှ လူရာဝင်တာလား??? -
သင်ဟာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့လိင်တံကို အားမရလို့ ဒါမှမဟုတ် ပိုပြီးကြီးလာချင်လို့ ကြီးဆေးထိုးဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိနေတဲ့သူတစ်ယာက်လား? ဒါဆိုရင် ညီလေးကို ကြီးလာအောင်မလုပ်ခင် ဒီအချက်တွေကို သိကိုသိထားရပါမယ်…
ကိုယ့်ရဲ့ ပါတနာကို စိတ်ကျေနပ်မှုမပေးစွမ်းနိုင်လို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ size ကို အားမရလို့၊ ဒါမှမဟုတ် နဂို size ထက်ကို ပိုကြီးချင်လို့ ကြီးဆေးတွေထိုးပြီး ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတွေ၊ နောင်တရနေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေတာဟာ ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါ။
ကြီးဆေးထဲမှာ ဆီလီကွန် ရယ်၊ တခြားအဆီတွေနဲ့ရောပြီး ထိုးပေးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဒီဆေးတွေဟာ FDA approved လည်းမဟုတ်၊ တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်း မလုပ်ပေးတဲ့ cosmetic procedure တစ်ခုမို့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို အတိအကျပြောဖို့တော့ ခက်ခဲပါတယ်…
ဒီ procedure က စနစ်တကျစမ်းသပ်ပြီး ထိုးဖို့နေရာကိုလည်း အတိအကျ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင် ထိုးဖို့ပမာဏကိုပါ အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်လို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာကို ထိုးပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီလို လက်တည့်စမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒုက္ခတစ်ပုံတစ်ပင်ပါလာပါပြီ
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက သေချာပိုးသတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အပြင် အသုံးပြုတဲ့ဆေးထိုးအပ်ကလည်း မသန့်ရှင်းခဲ့ရင်တော့ ဒီကနေတစ်ဆင့် ပိုးဝင်ပြီး ပြည်တည်နာဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာတို့တွေ့ကြုံဖူးတဲ့ ကြီးဆေးထိုးထားသူတွေအကုန်လုံးကတော့ ပုံစံကျပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ လှလှပပကြီးလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပုံပျက်ပန်းပျက် ကြီးလာကြမျိုးပါ
လိင်တံကို ကြီးဆေးထိုးပြီးသွားရင် ခံစားရမယ့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
ဆေးခဲတာကို သောက်ဆေးနဲ့လည်း ခြေလို့မရပါဘူး။ ကုသနည်းက တစ်မျိုးတည်းသာရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ခွဲစိတ်ပြီး ခြစ်ထုတ်တဲ့နည်းတစ်ခုတည်းပါ။ ခြစ်တာနဲ့ပဲမပြီးပါဘူး။ အနည်းဆုံး ( ၂ ) ခါလောက်ခွဲစိတ်ရပါတယ်။
ပထမအဆင့်မှာ silicon ဆီလီကွန်တွေကိုခြစ်ထုတ်ပြီး လိင်တံကို ကပ္ပါယ်အိတ် အရေပြားထဲမြှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် ၆ လခန့်အကြာမှ ဒုတိယအကြိမ်ခွဲစိတ်ပြီး လိင်တံကိုပြန်ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများပါတယ်။ ဆင်ဖိုးထက် ချွန်းဖိုးကြီးတဲ့အဖြစ်မျိုးပါ။ ဒါ့အပြင် ခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးသူတွေက ရှိရင်းစွဲ နဂိုအရွယ်ထက်ပိုပြီးသေးသွားကြတာမို့ မထိုးခဲ့ရင်အကောင်းသားလို့ နောင်တရကြရပါတယ်
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားကို ပိုကြီးလာအောင် ကြီးဆေးထိုးရင် ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိကြပြီဆိုတော့ ထိုးဖို့စဉ်းစားနေတာထက် တခြားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးသုခပြည့်စုံစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ပြောင်းပြီးရှာဖွေကြဖို့ကိုပဲ ဒေါက်တာတို့က အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်
#HOPE#HOTLINE#siliconepenis See less
Jun 10, 2022 Health, Health Tips, Healthy Lifestyle, Sex Education
အဆင်သင့်မဖြစ်ခင် ကိုယ်ဝန်မရစေဖို့ HOPE နဲ့တိုင်ပင်ပါ
ကြို့ထိုးပြီဆိုရင် ဘာတွေခိုးစားထားတာလဲလို့ မေးခံရတယ်ဟုတ်?